5 Izindlela ezilula zokufumana okulungileyo kwiStereo yakho yeStereo
Ukuthenga izikhokelo Umsindo
Fumana iNkqubo Efanelekileyo kwiStereo System
Ulungiso oluncinane lunokukhokelela kwiindawo eziPhakamileyo, iiMids ezichanekileyo kunye ne-Deep Bass
I-audio high-end ingabonwa ngekota ye-snobby. Kwabanye, kubonisa ukuba umntu kufuneka achithe imali engavamile yokufumana umgangatho ophezulu omsindo. Kodwa inyaniso kukuba unokwakha i-stereo yefriji yefestile eyinhle ngenkqubela uhlahlo lwabiwo-mali nokuba nexabiso elithengiweyo elingaphantsi liyakwazi ukusebenza ngokugqwesileyo xa kusekwe ngokufanelekileyo kwindawo efanelekileyo yokuphulaphula. Inxalenye ephambili kukuba awufuneki nokuba ngumculo we-audiophile ukwenza ezi lungiso. Funda ukuze uqonde iindlela ezilula zokufumana okungakumbi kwizinto onokuzo.
Khetha Igumbi elinama-Acoustics amahle
Amagumbi aneendawo ezininzi ezinzima zivame ukudala ukucinga okungafunekiyo. Leren Lu / Getty Izithombe
Kanye njengendlela isithethi kunye / okanye i-receiver eyenza isiseko sokuveliswa kwemisindo emihle, igumbi le-acoustics lidlala indima ebalulekileyo. Kwezinye iimeko, indawo kunye nokubekwa kwegumbi kunokuba nempembelelo enkulu kumgangatho wonke womculo - nangaphezulu kunezinto ezidibeneyo.
Igumbi elinemihlaba emininzi enzima, efana neyiteyili okanye i-wood floor, iindonga ezingabikho, kunye / okanye iifestile zeglasi, kunokudala ezininzi iimpawu ezibonakalayo. Ukufakwa kwezinto eziphambili kungabangela negalelo kummandla wokuphulaphula ongaphantsi kweyona ndawo, nayo. Ezi ziboniso kunye nezibonakaliso zikhokelela ekuveliseni ukuhlawuleka kwezilwanyana eziphantsi, eziphakathi kokugqithisileyo kunye neendawo eziphakamileyo, kunye nomfanekiso ophazamisayo. Inkcazo yegumbi ibalulekile. Imimandla engaqhelekanga okanye engaqhelekanga ihlala yenza ngcono kunezikwere, ii-rectangles, okanye ezinokulinganisa ngokuphindaphindiweyo ngokuthe ngqo (oko kunokudala amagagasi okuma).
Ngoko ke uya kufuna ukuzama ukwenza ntoni "unciphisa" igumbi, kodwa nje-emininzi kwaye umculo wakho unokuqala ukuvakala ngokungavamile. Iipakethi / ii-rugs, iiferethi kunye neempahla ezixhasayo zinceda ukunciphisa isandi kunye nokufumana ingcamango, ngokudala ukudala indawo engcono yokuphulaphula. Ukufudukela kwefenitshala ngaphakathi kwigumbi kunokuba nempembelelo emangalisayo (umzekelo, ukukrazula i-sofa kwisikhundla esingaphakathi kwindawo yokushiya eludongeni).
Kunzima ukuhlawula izibilini eziphezulu, ngaphandle kokuhambisa zonke izixhobo zakho kwelinye igumbi. Kodwa ukuba ufuna ukufumana eyona nto imali yakho kwisikhethi okhethileyo, kubalulekile ukuba ukhangele kwizonyango ze-acoustic . Uya kugqiba ukukwazi ukuva ezinye izithethi kunye negumbi elincinane.
Beka abaKhulumi ngokuchanekileyo
archideaphoto / Getty Izithombe
Wonke amagumbi aneemodemu ezixhasayo (ezaziwa nangokuthiwa amagagasi omileyo) anokukwazi ukukhulisa okanye ukunciphisa amajelo athile ngokusekelwe ubude, ububanzi kunye nokuphakama kwegumbi. Xa kunokwenzeka, ufuna ukuphepha ukuba ube nebala elifanelekileyo lokuphulaphula libe liziko elifileyo phakathi kweendonga. Ukulungiswa kokufakwa kwesithethi kunceda ukuqinisekisa ukulungelelaniswa, impendulo yemvelo kwisithethi sakho kunye ne-subwoofer. Ukufakwa kwe-Haphazard kungaholela ekusebenzeni okunokukwenza ukuba uzibuze into engalunganga ngezixhobo zakho.
Ukulahla i-subwoofer nomaphi apho kubonakala kulula kakhulu kukungena-acoustic. Ukwenza oku kunokubakhokelela ekuhlaleni okudakeni, okudakayo, okanye okuhlambalaza. Ngokuqinisekileyo ufuna ukuchitha ixesha ukubeka ngokufanelekileyo i-subwoofer yakho ukuze usebenze kakuhle . Kungabandakanya ukulungiswa kwakhona kwefenitshala ngokujikeleza, ngoko uvulekele amathuba!
Ngokuphathelele izithethi ze-stereo (okanye iitishi ezininzi), ukubekwa ngokufanelekileyo kunceda ukunciphisa iindidi ezahlukeneyo zamagumbi / ukuboniswa ngelixa ugcine ukucinga ngokugqithiseleyo kunye neepropati ze-soundstage. Ngokuxhomekeke kwizinto osuke unako, akunakubiza i-dime.
Ukuba izithethi zakho ziye zaphumla ngqo phantsi, lixesha lokutshala imali kwiindawo ezithile ezinokuthengwa. Ukukhulisa izithethi malunga neeklanu kwienyawo kuya kwenza izimanga zokuthembeka, nokuba uhleli okanye umi. Ukuba sele sele usebenzisa i-speaker stand, qinisekisa ukuba ubakhuphe ngaphandle kweendonga ezingemuva. Kwakhona, khangela ukuba badibene ngokubanzi malunga neendonga ezifanayo (kumanxele nangamacaleni okunene) ukuze ugcine umfanekiso ochanekileyo we-stereo.
Qinisekisa ukuba isithethi ngasinye siqhutywe ngokunyanisekileyo ukuze kuncitshiswe ukuba kunokwenzeka ukuba izibilini ziveze ingxolo engafunekiyo. Yaye kuxhomekeke apho uceba ukuzonwabisa nomculo ngokubhekiselele kwiithethi, uya kufuneka uqikelele "ukuzithoba" ngeyona nto.
Fumana loo ndawo
UDennis Fischer Photography / Getty Izithombe
Igama elithi "imiba yendawo" ihlala isebenza kwiinkalo ezininzi zobomi bemihla ngemihla, kubandakanywa nokuzonwabisa. Ukuba umile kwicala kwaye ulandelelanise izithethi zakho, awukwazi ukulindela ngokufanelekileyo ukuphula umdlalo womculo ngokucacileyo. Indawo efanelekileyo yokuphulaphula kufuneka ibe "indawo enothabathekileyo" ekamelweni, apho ungayixabisa inkqubo ngokufanelekileyo.
Ukuchonga indawo epholileyo ebonakalayo elula ephepheni. Ngokwenza oko, unokulindela ukuchitha ixesha elincinane ukulinganisa nokulungisa izivakalisi, izixhobo, kunye / okanye ifenitshala. Okubalulekileyo, isithethi sasekhohlo, isithethi esifanelekileyo, kunye nebala elimnandi kufuneka lenze unxantathu olinganayo. Ngoko ukuba izithethi zombini ze stereo ziyizintandathu zenyawo, indawo enothekayo iya kulinganisa iinyawo ezintandathu ngqo kwisithethi ngasinye. Khawukhumbule ukuba xa ugqiba ukukhankanya izithethi esondeleyo okanye ukugqithisa kude komnye nomnye, kuya kutshintsha ubungakanani benxantathu obunxantathu kunye nesimo sebala elimnandi.
Emva kokuba izithethi sele zibekwe, zijonge kuzo ukuze zijolise ngqo kwindawo epholileyo. Oku kunceda ukubonisa ukucinga okulungileyo kunokwenzeka ukuphulaphula ngokuthe tye. Ukuba kwenzeka ukuba uhleli / umile kwikona echanekileyo yebala elimnandi, hambisa enye inyathelo ukuya phambili kwisithethi kwaye uphelele. Ufuna amaza omsindo ukuba aguquke kwindawo ephakamileyo yentloko yakho kungekhona kwiphondo lakho.
Sebenzisa i-Wire Quality Wire
Akudingeki ukuba uchithe i-fortune ukuze ube nezixhobo zomsindo ophezulu. UDaisuke Morita / Getty Izithombe
Omnye unokuchitha iiwaka zama-dollar kwizixhobo zithethi, nangona abaninzi bayavuma ukuba ukwenza oko akuyimfuneko. Nangona kunjalo, iintambo zesithethi ezenziwe ngekhwalithi yesilinganisi esifanelekileyo zingenza umehluko omkhulu kwizinto ozivayo ezivela kwizithethi zakho. Isibaluleka esibalulekileyo sesithethi esilungileyo sikwazi ukuhambisa okwaneleyo okwangoku. Kwiinkoliso ezininzi zithandeka, ngoko ke khankanya iinkcazo zakho zesithethi kwiziko lokuqala. Izixhobo ezibandakanya ezinye izithethi zingaba zincinci njengamazinyo, okuqinisekileyo akunakucetyiswa.
Kwinqanaba elincinci, ukuthengwa kwentambo yesithethi okungenani ubuncinane bama-12 - amaninzi aphezulu amelela iingcingo ezincinci. Ngoko ungakhethi ukusebenzisa nantoni na encinci kune-12 gauge, ingakumbi ukuba iingcingo kufuneka zithathe iindawo ezide. Awukwazi ukulindela ukusebenza komsindo xa izithethi zakho ziphela ziphantsi.
Iiprayimenti ezininzi kunye / okanye iinkcazo zogqirha zonke izinto eziphucula izandi kunye / okanye ukuxhamla okungcono kwiziphelo. Kukho iindidi zomsindo abathi ziyakwazi ukuva umahluko; abanye bathi ithengisa nje kuphela kwiyona nto iphezulu kakhulu. Kungakhathaliseki ukuba uthatha isigqibo, khetha umgangatho wokwakha. Awufuni into encinci kwaye ipholile ukuze igugu okanye ihlaziye / iphule ixesha. Unokufumana iingcingo ezinkulu ngaphandle kokuhlawula ngeempumlo.
Ngoku ukuba izithethi zakho zifaka iiseti ezimbini zokuzibophelela kwezithuba emva, ziyakwazi ngokupheleleyo ukucwangcisa izithethi ukuphucula umgangatho osemgangathweni . Ukuba izithethi kunye nezixhobo sele zifakiwe, konke okufunekayo kuyisethi esongeziweyo yeetambo zokuhamba kunye neyokuqala. Khangela kabini ukujonga kuqala ukuba ummkeli wakho ufanelekile, uqhagamshelwano olukhoyo ukufumana. Ukuba kunjalo, i-bi-wiring ingaba yindlela engabizi kakhulu yokuphucula nokwenza isandi kwisimo sakho se stereo.
Lungisa izicwangciso zeZona kwiReceiver / Amplifier yakho
Uninzi lwabafumanayo kunye nezikhululo zineenkcukacha ezongezelelweyo zokulawula ukulungiswa nokuphucula ukuveliswa kwesandi. Gizmo / Getty Izithombe
Uninzi lwababamkeli be-stereo kunye ne-A / V baneenkqubo zemenyu evumela ukuba abasebenzisi bahlengahlengise imisebenzi ephathekayo yeempawu kunye neempawu. Phakathi kwezona zibalulekileyo zibalulekileyo ubungakanani besithethi, imveliso ye-bass, kunye nomthamo wesithethi. Ubunzima besithethi (enkulu / encinci) inquma uhla lwamaxesha anikezelwa kwisithethi ngummkeli. Iyancishiswe yizakhono zetetho, ngoko ke zonke iithethi zingayisebenzisa ngokunjalo lo msebenzi.
Izicwangciso zokuvelisa iBass zinganquma ukuba i-lows iya kuphinda ikhutshwe yizikhulumi ezisekhohlo / ezilungileyo, i-subwoofer, okanye zombini. Ukuba le khetho ikuvumela ukuba uhlalutye amava omculo kwizinto ozikhethile. Mhlawumbi ujabulise ukuphulaphula izinto ezingaphezulu, ngoko unokukhetha ukhetha ukuba izithethi zidlale i-lows. Okanye mhlawumbi izithethi zakho zisebenza kakuhle ekuveliseni kuphela eziphakamileyo kunye nee-mids, ngoko ke usenokushiya i-subwoofer
Abamkeli abaninzi kunye nama-amplifiers nabo banokuqulunqwa kwemigangatho yokulungisa i-decoding algorithms (umz. Dolby, DTS, THX) kwiifom zabo ezahlukeneyo. Xa kunikwe amandla, unokufumana umphumo ozwakalayo wezandi ezijikelezayo kunye nesandi esandiweyo, ngokukodwa kwimithombo yomsindo ohambelanayo kunye / okanye kwiimidlalo kunye nemidlalo yevidiyo. Yaye ungesabi ukuqhubela phambili isandi kwizithethi zakho ngokulungiswa kweziganeko kunye nokulawula kwe-stereo equalizer . Abamkeli bamaninzi banikela ukukhethwa kwezinto zangaphambili, ngoko unako ukuphucula ngokugqithiseleyo uhlobo lwenu lomculo ngokubenza babe nezwi elifana ne-jazz, idwala, ikhonsathi, i-classic, nokunye.
I-7 elungileyo yangaphandle kunye nabakwa-Backyard Speakers ukuthenga ngo-2018
I-8 Best Guitar Amps Yokuthenga ngo-2018
Iinqununu ezi-5 ezilungileyo zokuthenga ngo-2018 kwiZithuba ezincinci
Yiyiphi Imveliso Yomnxeba Wongenanto Engalungile Kuwe?
I-Top 6 ye-iPod-Friendly Music Stores
I-CES 2014: Ii-Headphone ze-Audiophile ezintsha
I-8 Best Best Speakers Speakers ukuthenga ngo-2018
I-7 Best Best Monitorors ukuthenga ngo-2018
Indlela Yokubukela Ukuvulwa Kwemongameli ku-Intanethi
Iifayile eziphambili ze-Spam zeWindows
Ukubuyiselwa kwe-iPhone 7: Eyaziwayo ngaphandle; Yonke Ehlukile Ngaphakathi
Jonga iVidiyo zeVidiyo kwi-Intanethi kunye nalezi zi-6 zeVine Viewers
I-Wharfedale Diamond yasekhaya yaseStateral Review System
Ziziphi iifom ze-eBook Ngaba inkxaso ye-iPad?
Yakha i-Gold Seal nge Ribbons kwi-Microsoft Word 2010
Yiyiphi i-Digital Rights Management?
Ihlabathi Lwamkelekileyo - Iprojekthi Yenu Yokuqala Yemispberry
Uhlobo lweefayile eziqhelekileyo kunye neZongezelelo zeFayile
Indlela yokuhlaziya i-iTunes kwi-Latest Version
Ukungabikho kokusesikweni: UThixo Ophakathi Kwethu Ukuhlaziywa Okugqibeleleyo
Iingcamango ezi-5 zeeGeek Security Geeks
Ukuxazulula iingxaki nge-Wireless Networking kwiIOS Devices
Ubomi bukaJack Tramiel Ingxenye 4 - iMfazwe yase-Atari
Indlela yokufakela ifoto kumyalezo we-imeyile kwi-iPhone okanye kwi-iPad
IiNdawo eziPhambili eziKhuselekileyo kwabaselula
Indlela yokusebenzisa 'Isixhobo se-Ngram Viewer' kwiGoogle Books
I-5 Best Track Trackers yokuthenga ngo-2017
Ukusebenzisa i-Excel Shortcut to Add a Worksheets
I-Apple Watch Band isebenza njenge-Medical-Grade Heart Monitor